LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom Androidsis
အကယ်၍ သင်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ LG G3 မော်ဒယ်တစ်ခုပိုင်ရှင်ဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ် d855 မော်ဒယ်တူတူဖြစ်လျှင်ယနေ့သင့်အားကံကောင်းသည့်နေ့ရက်ဖြစ်သည်။ LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Romကိုအခြေခံထားသည့် Android Lollipop Rom မူရင်းစတော့အိတ် LG က 21A, LG G4 တွင် UX4 မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သည် နှင့် LG ၏ကိုယ်ပိုင် application များဖုံးလွှမ်း မကြာသေးမီက LG V10 ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်.
AOSP Rom နှင့်မတူသည်မှာအခြားတစ်ရက်တွင်တပ်ဆင်ရန်သင်ကြားပေးခဲ့သည် Android 6.0 Marshmallow ကိုအခြေခံပြီးစမ်းသပ်ထားသည့် rom, ဤ Rom သည်နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းရှိပြီးကျွန်ုပ်အတွက်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်နှင့် LG G3 စမ်းသပ်မှုများအရအမြဲတမ်းပြုလုပ်နိုင်သည် LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom။ ဒါကြောင့်နောက်ထပ် ado မပါဘဲငါကိုနှိပ်ပါရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည် «ဤစာကိုဆက်ဖတ်ရှုပါ» ဒီကို install လုပ်ဖို့သင်လိုအပ်တာအားလုံးကိုရှင်းပြတဲ့နေရာ Rom NovaStock V5.521A ဖိုင်နယ်.
ဒီ post ကိုဆက်မလုပ်ခင်အဖွဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Nova အဖွဲ့ နှင့်အဖွဲ့ HTC Mania ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ Android Rom ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနဲ့မျှဝေဖို့နဲ့သူတို့ကိုတိုက်တွန်းဖို့ပါ HTC Mania ဖိုရမ်သို့ဝင်ပါ LG G3 D855 အတွက်ဤစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ Rom နှင့်ပါတ်သက်သည့်သံသယများသို့မဟုတ်မေးခွန်းများကိုဖြေရှင်းပေးမည့်နေရာ။
2 LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom ကို flash လုပ်ရန်လိုအပ်သည်
3 LG G5.521 အတွက် Rom NovaStock V3A ၏ Flash နည်းလမ်း
တစ်ဦးရှိ LG G3 အမျိုးအစား D855 သို့မဟုတ်တူညီသောနိုင်ငံတကာမော်ဒယ်ဖြစ်လာသော။
terminal ကိုယူထားပါ ပြုပြင်ထားသော Recovery နှင့်အတူ.
ယင်းတို အသစ်ပြန်လည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ၎င်း၏နောက်ဆုံးရရှိနိုင်ဗားရှင်းရန်။
ရှိ တစ်ခုလုံးကို operating system ၏ nandroid backup လုပ်ထား မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ပြproblemsနာများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ Rom ကိုမကြိုက်ပါကယခင် Rom သို့ပြန်သွားရန်
USB debugging ကို enable လုပ်ပြီးဘက်ထရီအား ၁၀၀ x ၁၀၀ ဖြင့်အားသွင်းသည်
LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom ကို flash လုပ်ရန်လိုအပ်သည်
ဖိုင်များလိုအပ်သည် ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာ Rom NovaStock V5.521A ကို flash လုပ်ပါ ၎င်းတို့သည် gigabyte ပတ်ပတ်လည်အလေးချိန်ရှိပြီးသင် download လုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သော zip format ဖြင့်ချုံ့ထားသောဖိုင်တစ်ခုတည်းအတွက်သာကန့်သတ်ထားသည်။ ရုံဒီ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်.
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကို OTG မှတစ်ဆင့် Flash G3 ၏ internal memory သို့မဟုတ်ပြင်ပ Pendrive တစ်ခုသို့ decompress မလုပ်ပဲကူးယူရန်လုံလောက်လိမ့်မည်။ ထို့နောက် Recovery mode ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးအောက်ပါအဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာပါ။
LG G5.521 အတွက် Rom NovaStock V3A ၏ Flash နည်းလမ်း
ကျနော်တို့ option ကိုသွားပါ သုတ် နှင့် အဆင့်မြင့် Wipe ငါတို့သုတ်၏ cache ကို, ဒေတာ, စံနစ် y dalvick cache ကို ပြင်ပချိတ်ဆွဲမှုမှဖောင်းပွမှုဖြစ်သည့်အတွင်းမှတ်ဉာဏ်အပြင်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုငါတို့သွားကြသည် သုံးကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ.
ကျနော်တို့ option ကိုသွားပါ သုတ် နောက်တဖန်ဤအချိန်ကျနော်တို့၏ option ကိုရွေးပါ Format ဒေတာ နှင့်ပေါ်လာတဲ့ကီးဘုတ်ပေါ်ကျနော်တို့စကားလုံးရိုက်ထည့်ပါ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုပါသည် ဒါကို ၂ ကြိမ်လုပ်တယ်၊ စုစုပေါင်း ၃ ခါလုပ်တယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ option ကိုသွားပါ Install နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် rom ၏ zip ကို select နှင့်၎င်း၏တပ်ဆင်အတည်ပြုပါ။
ဒီဖြင့်သင်သည်ငါ့လအတွက်ခံစားခွင့်ရှိပြီးသား LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Romပထမ reboot သည်နှေးကွေးနေပြီးဆယ်မိနစ်ခန့်ကြာနိုင်သည်ကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။ ထို့ကြောင့်စိတ်ရှည်။ terminal ကိုလုံးဝ reboot လုပ်ရန်စောင့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G3 အတွက်အကောင်းဆုံး Rom: NovaStock အံ့သြဖွယ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘက်ထရီ
ဥပမာ T-Mobile သို့မဟုတ် At & t မှဥပမာ D851 နှင့်အတူလိုက်ဖက်မှုလုံးဝမရှိပါ။ ကင်မရာကော။
Adrian bravo ဟုသူကပြောသည်
Adrian Bravo အားပြန်ပြောပါ
ဟုတ်ပါတယ်၊ အကြောင်းမှာ HTCmania ရှိ Rom ၏တရားဝင်ချည်နှောင်မှုတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ရာအူးလ် Pallol (@Hydraulicpallol) ဟုသူကပြောသည်
နယူးရမ်ကိုငါပိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါက Novastok rom ပဲ။ ကံကောင်းတာကဒီမိုဘိုင်းမှာနှံ့နှံ့စပ်စပ်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ roms တွေအများကြီးရှိပြီး
Raul Pallol (@raulpallol) ကိုစာပြန်ပါ
ငါ android version ကို download လုပ်ပြီးပြီ။ ငါစမ်းကြည့်ပြီးပြီ။ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ နောက်ကျတာကလွဲရင်အရာအားလုံးဟာအရမ်းကောင်းတယ်၊ ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးကြော့ရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းရှိတယ်။ 100% အကြံပြုခဲ့သည်
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ် Romg ကို LGg3 VS985 သို့ install လုပ်နိုင်ပါသလား။
အန်တိုနီ Caba ဟုသူကပြောသည်
Anthony Caba ကိုပြန်ပြောပါ
ငါအခု XenonHD ကိုစမ်းသပ်နေတယ်၊
Andrey Ch ဟုသူကပြောသည်
1 ROM စတင်ကတည်းကငါဒီ ROM ကို install လုပ်ပြီးပြီနှင့်တကယ်တကယ်ကောင်းသွား!
၁-၂ လတိုင်း ROM ကိုပြောင်းတဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။
Andrey Ch အားပြန်ပြောပါ
ကင်မရာက g4 နဲ့တူလား။
T-mobile d851 မော်ဒယ်အတွက်အလုပ်လုပ်လားသိလား။
ရော်ဂျာ rodriguez ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းမွန်သော rom အလွန်အရည်နှင့်အလွန်ကောင်းသောဘက်ထရီသက်တမ်း
Roger Rodriguez အားပြန်ပြောပါ
အရင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်လိုငါလည်း XenonHD ရှိတယ်၊ ဆံပင်ကိုရှုပ်ထွေးနေတယ်။
audio mod ပြissuesနာတွေအတွက်စတော့ရှယ်ယာကိုလွတ်သွားတာပါ။ XenonHD မှာနားကြပ် (သို့) အရန်ကေဘယ်ကြိုးတပ်လိုက်တဲ့အခါငါတုန့်ပြန်တာမကြိုက်ဘူး။
အရမ်းကောင်းပါတယ်။ signal ကို twrp ကနေတစ်ဆင့်ငါပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်လာတာနဲ့ signal ကိုအခက်အခဲရှိခဲ့တယ်။
Dony မိုcloudy်းတိမ် 2.5 ၏ modem ကဘာလဲ, သင်က link ကိုရှိလိမ့်မည်နည်း
lg g3 stylus မှာအလုပ်လုပ်မလား။
အော်စကာ Corrales ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် ROM ကို Verizon VS985 ကွန်ပျူတာတွင်တပ်ဆင်နိုင်ပါသလား။ Mobile Hot Spot option သည်ကိုလံဘီယာအတွက်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်မလား
အော်စကာ Corrales အားပြန်လည်ပြောဆိုပါ
တစ်ယောက်ယောက်ကစမ်းကြည့်တာလား g3 2.5 ထက်သာတာလား။
အရမ်းကောင်းနေပြီ KN-VIRUS V17 ACURA ကိုလည်းကြိုးစားခဲ့တယ်။
Enzo Crespo ဟုသူကပြောသည်
Enzo Crespo အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း၊ ပြန်လည်ဆယ်တင်မည့်အမျိုးအစားသုံးခုကိုကျွန်ုပ်မည်ကဲ့သို့ download လုပ်မည်နည်း။
Recovery Philz Touch လား။
Martin Irigaray ဟုသူကပြောသည်
၁) မေးလ်အက်ပလီကေးရှင်းကကျွန်ုပ်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပြုပါ။ ငါဖွင့်တိုင်း "ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာမေးလ်ပိတ်ထားသည်" ငါဝင်လို့မရဘူး။
၂) Play Store မှကူးယူလွန်းခြင်းကနှေးလွန်းသည်။ mumca သည်ကျွန်ုပ်အားဤသို့ပေးခဲ့သည်
Martín Irigaray အားစာပြန်ပါ
Jonathan Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနံနက်ခင်းကျွန်ုပ်ကျွန်ုပ်၌ stockkat ၌ရှိသောမေးခွန်းရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည်ဤ rom ကိုတိုက်ရိုက် (သို့) kitkat မှ Marshmallow သို့သွင်းနိုင်သည်။
jonathan gonzalez အားပြန်ပြောပါ
ဒီ rom နဲ့ဖုန်းကိုအပူမပေးတော့ဘူးလား။
မင်္ဂလာပါကျွန်မ rom ကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်၊ အရမ်းအရည်ပျော်တယ်၊ အရမ်းကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါသတိထားမိကြဘူးအပူချိန်ပြissueနာပါ! ငါ့မှာ gg d3 lg ရှိတယ်။ သီချင်းနားထောင်တာနဲ့ဘက်ထရီကအရမ်းမြန်တယ်။
Wipe cache, data, system နှင့် dalvick cache နှင့် data format ငါအခန်း၏ zip ကိုမတွေ့ရှိပြီးနောက်ငါစွန့်ခွာချင်သောအခါငါလိုဂို၌မှီဝဲတယ်, ကကူညီ! : c
ဟဲလိုငါဘယ်ကနေ download လုပ်ပါလဲ
အန်တိုနီယို Cesar ဟုသူကပြောသည်
Antonio Cesar ကိုပြန်သွားပါ
ငါမှာသံသယတစ်ခုရှိတယ်။ ငါမှာ D855P ရှိပြီ။ အခြား ROM တွေတပ်ဆင်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်အများဆုံးလူအားလုံးကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ VERSION OSEA D855 ရှိဖို့ငါ့ကိုတောင်းဆိုကြတယ်။ သို့မဟုတ်သင်ဘာလုပ်သင့်သနည်း။
အက်ဒ်မွန် (@ edmond696) ဟုသူကပြောသည်
ဟိုင်း၊ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ rom ကိုပြန်လည်တင်ပို့နိုင်သလား၊
အက်ဒမွန် (@ edmond696) ကိုစာပြန်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်အသစ်ပြောင်းရန်လင့်ခ်သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ တူညီသောခေါ်ဆိုမှုအက်ပ်မှခေါ်ဆိုမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နည်းလမ်းသည်အလုပ်လုပ်သည်။ သို့မဟုတ်ထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက်အခြား application ကိုတပ်ဆင်ရန်လိုသလား။ IMAP မှမေးလ်သည်အခြား ROMs တွင်အလုပ်လုပ်သည် ငါ IMAP POP ကိုသာအလုပ်လုပ်သည်မဟုတ်။
တစ် ဦး က llajtamasi ဟုသူကပြောသည်
A llajtamasi သို့စာပြန်ပါ
Bluboo Uwatch သည်တန်ဖိုးနည်း Android Wear နာရီဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ ၅၀ အောက်သာရှိသည်
အချို့ Nexus 6P အသုံးပြုသူများသည်ကျိုးပဲ့သောနောက်ဖန်ခွက်ကိုတိုင်ကြားကြသည်